Ukuguquka kwesimo sezulu kubanga iluphu elibi ku-Amazon | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kubanga iluphu elibi e-Amazon
Ukuguquka kwesimo sezulu kuguqula wonke amaphethini wesimo sezulu emhlabeni. Kokubili emazingeni okushisa, njengasembusweni wemvula nabanye. Akuyona yonke imvelo yomhlaba esengozini ngokulinganayo emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu, futhi ayithinteki ngendlela efanayo.
Kulokhu, sizokhuluma ngakho imiphumela yokuxhuma edalwe ukwehla kwemvula phezu kwehlathi lase-Amazon. Yini ebangela ukuguquka kwesimo sezulu e-Amazon?
Umphumela wokuqala wokwehla kwemvula e-Amazon ukwanda kokufa kwamahlathi. Ihlathi lemvula lase-Amazon belilokhu libhekene nemvula eningi nomswakama omkhulu. Kodwa-ke, ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu, iphethini lemvula liphansi.
Izimila cishe zibhekele ukwakheka kwamafu okungu-30% futhi, ngokunciphisa inani lamahlathi e-Amazon, yethulwa ngomzuzwana. Lina kancane, kunezihlahla eziningi ezifa, lina ngisho ngaphansi ngoba kunezihlahla ezimbalwa, kanti nezihlahla eziningi ziyafa ngoba lina kancane. Ngaphezu kwalokho, ukwehla kwesibalo sezihlahla eziphilayo kubhebhethekisa isikhathi sesomiso esifundeni, nakho okwandisa izinga lokufa kwezimila.
Ihlathi lemvula lase-Amazon liyisici esibucayi ohlelweni lwesimo sezulu somhlaba wonke. Uma indawo yayo iqhubeka nokuncipha ngesilinganiso esifanayo njengasemashumini eminyaka adlule, lokhu kungaholela ezinguquko ezinkulu esimweni sezulu seMhlaba. Kwenziwe ucwaningo lokuthi leli hlathi lisabela kanjani ezikhathini ezinzima kakhulu zesomiso okulindeleke ukuthi zivame kakhulu futhi zibe namandla ngenxa yesivuvujikelele.
Vele, izenzo zabantu ehlathini zisibhebhethekisa lesi simo sibe sezingeni eliphakeme, ngoba siyimbangela eyinhloko yokuqothulwa kwamahlathi e-Amazon. Ngemuva kwenkathi eyomile lapho imvula iba uhhafu ovamile, kungalahleka kuze kufike ku-10% wehlathi. Kungabonakala njengokuncane, kodwa uma ihlathi liqhubeka nokunyamalala, kanjalo nenhlabathi evundile, ngoba zonke izakhi ze-Amazon zigcinwa ezitshalweni. Ukwehla kwazo kuzoba nomthelela omubi ekumungeni kwe-CO2, kubangele ushintsho olukhulu esimweni sezulu emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kubanga iluphu elibi e-Amazon
Isilinganiso seKardashov. Izinga lokuthuthuka kwezobuchwepheshe kwempucuko
Amathiphu wokujabulela ama-Perseids 2017